Vaovao - Famakafakana ny firoboroboan'ny indostrian'ny sinoa any Shina amin'ny ho avy
Fanadihadiana ny firoboroboan'ny indostrian'ny fitaovam-panjakan'i Shina amin'ny ho avy
1. Topimaso momba ny fampiroboroboana ny indostria
Ny stationery dia fitaovana isan-karazany ampiasain'ny olona amin'ny hetsika ara-kolontsaina toy ny fianarana, ny birao ary ny fiainana an-trano. Miaraka amin'ny fivoaran'ny toekarena sy ny teknolojia mitohy, ny sokajy fitaovam-pitaterana dia havaozina sy novolavola tsy tapaka ihany koa. Ny fitaovam-pitenenana maoderina dia azo zaraina amin'ny fitaovam-panoratana, fitaovam-pianarana ho an'ny mpianatra, Misy sokajy maro toy ny biraon'ny birao, fitaovam-pianarana, fitaovam-pitaterana ary kojakojam-panatanjahantena.
Ny pensily dia an'ny indostrian'ny fizaram-paritra, ary mitana toerana lehibe eo amin'ny toeran'ny birao. Mpianatra ny ankamaroan'ireo mpanjifany. Ny orinasa mpanamboatra pensilihazo sinoa dia teraka tamin'ny taona 1930. Tamin'ny 1932, tao Kowloon, Hong Kong, ny Sinoa dia nanambola sy nanova ny orinasa fanaovana pensilihazo notantanan'ny mpandraharaha anglisy ho lasa orinasa fanaovana pensilihazo malaza. Tamin'ny 1933, nifanesy nisesisesy ny Orinasa Pencil Beijing China sy ny Factory Huilen Pencil Shanghai. Wu Gengmei, izay niverina avy tany Japon tamin'ny 1935, dia nanangana orinasa mpamokatra pensilihazo fanta-daza any Shanghai izay afaka manamboatra cores firamainty, tabilao pensilihazo, mpanan-penina ary fanodinana tarehy fotsiny. Ny Harbin China Standard Pencil Company, orinasa iraisan'ny daholobe sy tsy miankina, dia naorina tamin'ny volana septambra 1949. Ilay orinasa dia mbola iray amin'ireo orinasa lehibe indrindra amin'ny indostrian'ny pensily nasionaly.
Ny pensilihazo nentim-paharazana dia mampiasa hazo toy ny barika sy grafit ho fotony, izay mitaky kitay be dia be ho lany. Ny fanapahana hazo betsaka dia manitsakitsaka ny fiheverana ny fiarovana ny tontolo iainana. Mba hahafahana mamaly ny filan'ny fampandrosoana ny tsena, ny taona 1969, ny orinasa Teijin dia namorona fomba famokarana pensilihazo plastika. Tamin'ny fahavaratry ny 1973, ny Company Berol an'ny Etazonia sy ny Sailorpen Company of Japan dia nividy an'io fomba io niaraka tamin'ny fotoana iray. Sailorpen dia nanomboka ny famokarana pensilihazo plastika tamin'ny volana aprily 1977. Tamin'izany fotoana izany, ny vodin-tsoratry ny pensilihazo plastika dia vita tamin'ny fifangaroan'ny grafite sy ny resina ABS, ary ny tampon'ny firaka dia nopetahany loko resin. Extruders telo no nampiasaina mba afangaro ireo fitaovana telo hanaovana ny pensilihazo, izay nanatsotra be ny fomba famokarana pensilihazo. Raha ampitahaina amin'ny pensilihazo hazo nentim-paharazana, ny pensilihazo plastika rehetra nataon'i Sailorpen dia malefaka kokoa ampiasaina ary tsy handoto taratasy sy tanana. Ny vidiny dia mitovy amin'ny pensilihazo tsotra. Lasa malaza ny pensilihazo plastika. Tamin'ny taona 1993, nanamboatra tsipika famokarana mitohy ho an'ny pensilihazo plastika ny mpamokatra fitaovana alemanina iray, izay afaka mamokatra pensilihazo manodidina ny 7.000 ao anatin'ny adiny iray. Ny pensilihazo dia 7.5 mm ny savaivony ary 169 mm ny halavany. Ity pensilihazo plastika ity dia mitaky vidin'ny famokarana ambany kokoa noho ny pensilihazo vita amin'ny hazo, ary azo amboarina amin'ny endrika isan-karazany, toy ny voasokitra, zigzag, endrika fo, sns.
Taorian'ny fampandrosoana maharitra sy fanangonan-karena, ny indostrian'ny fitaovam-pitaterana any Eropa, Amerika, Japon ary ny firenena hafa dia nibodo toerana lehibe teo amin'ny sehatry ny fitaovam-pitaterana manerantany. Saingy, noho ny anton-javatra toy ny vidin'ny asa sy ny fiarovana ny tontolo iainana, ny rohy famokarana alatety ambany dia nifindra tsikelikely nankany Shina, India ary India. Vietnam sy ireo firenena Aziatika atsimo atsinanana hafa dia mifindra tsikelikely amin'ny dingan'ny fiasan'ny marika, ny famolavolana ny vokatra ary ny fikarohana ara-materialy sy ny fampandrosoana.
2. Ny fironana fampandrosoana ny indostrian'ny fitaovana
1) Ny fanjifana fitaovam-pitaterana mazàna dia voamarika marika manokana sy manokana
Fitaovana fanoratana penina matetika ampiasaina amin'ny fianarana isan'andro sy ny asa. Miaraka amin'ny fanatsarana ny tahan'ny fidiram-bolan'ny mponina sy ny fanatsarana ny hevi-pisakafoanana, ny mpanjifa dia mirona kokoa hividy vokatra misy fahombiazana tsara amin'ny kalitaon'ny vokatra, ny haavon'ny endrika, ny endrin'ny terminal ary ny lazan'ny mpampiasa. Vokatra marika. Ny marika dia famaritana ny kalitao, ny toetra, ny fahombiazany ary ny haavon'ny fampiasana ny vokatra avy amin'ny orinasa. Izy io dia maneho ny fomban'ny orinasa, ny toe-tsaina sy ny lazany ary hisy fiantraikany betsaka amin'ny fitondran-tenan'ireo mpanjifa mividy.
2) Ireo fantsom-barotra amin'ny varotra dia matetika gadraina
Miaraka amin'ny fanamafisana ny fironana marika amin'ny fanjifana fitaovam-pitaterana, ny orinasan-tsoratry ny marika dia manohy mampiroborobo ny fomba fiasan'ny rojo, ary ny fivarotana fitaovam-pitaterana tsotra koa dia mampiseho fironana handray anjara mavitrika amin'ny franchise. Fivarotana fitaovam-pitaterana mahazatra no fantsom-pifamoivoizana matetika, saingy noho ny sakantsakana ambany fidirana sy ny fifaninanana vidin-javatra mahery vaika dia maro ny fivarotana fitaovam-pitaterana tsotra no manana tombom-barotra malemy, asa tsy milamina ary nesorina mihitsy aza noho ny fitantanana tsy mahomby sy ny tsy fahampian'ny vola. Ny asan-tsarimihetsika fitehirizan-tsoratry ny marika Franchising dia manampy amin'ny fanatsarana ny sarin'ny magazay, ny fanatsarana ny fametrahana ny kalitaon'ny vokatra amidy, ary ny fanamafisana ny fahaizana hanoherana ny risika amin'ny lafiny iray. Noho izany, tato anatin'ny taona vitsivitsy dia manan-danja ny fironana amin'ny fantsom-pifamoivoizana am-pitanterana.
3) Ny fanjifana fitaovana dia mandinika ny fizotran'ny tsirairay sy ny avo lenta
Amin'izao fotoana izao, ny mpianatra sy ny mpiasa birao dia aleony ny fitaovana famoronana, natao manokana ary lamaody. Ny fitaovam-panoratana toy izany matetika dia manana endrika famoronana tsy manam-paharoa, endrika vaovao sy lamaody ary loko miloko, izay afaka mahafeno ny fepetra ilaina amin'ny asa ary manatsara ny traikefan'ny mpanjifa. Mandritra izany fotoana izany, eo amin'ny sehatry ny sary, ara-bola, famolavolana ary fanomezana, mitombo ny vondrona mpanjifa avo lenta ary ny fitaovana avo lenta miaraka amina matihanina matanjaka, ny kalitao avo lenta sy ny sandany avo dia lasa toerana mamiratra vaovao hampiroborobo fanjifana fitaovana. Raha mila fanadihadiana bebe kokoa momba ny indostria, azafady mba jereo ny tatitra fanadihadiana momba ny fanadihadiana ny tsenan'ny indostria navoakan'ny China Report Hall.